Ukubuyekezwa kwe-Blu-ray: Isiswebhu noMzimba
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukubuyekezwa kwe-Blu-ray: Isiswebhu noMzimba
by admin December 19, 2013 939 ukubukwa
IWhip kanye noMzimba kuyisitolimende esithokozisayo ohlwini lwezincwadi eziningi zomenzi wamafilimu wase-Italy uMario Bava. Ngokwendaba, kukude nomsebenzi wakhe omuhle kakhulu. Ukuhamba kancane, ngesakhiwo esikwazi ukuba lula futhi sidideke. Kodwa-ke ngobuhle, umzamo ka-1963 uphakathi kwempumelelo emikhulu kaBava - futhi lokho kusho lukhulu kumqondisi odunyiswa kakhulu ngesitayela sakhe esiyingqayizivele nesinethonya.
Iskripthi, esibhalwe ngu-Ernesto Gastaldi (Torso), Ugo Guerra noLuciano Martino, senzelwe ukuthi sibe yimpendulo yase-Italiya kuzimo zakudala zikaRoger Corman zika-Edgar Allan Poe - futhi iphumelela kakhulu. Ngokushesha nje ngemuva kokubuya ekudingisweni aye esigodlweni sakhe somndeni, kubulawa isikhulu esasinesihluku uKurt Menliff (uChristopher Lee). Kepha ukuhlushwa komndeni wakhe kusekude ukuphela, njengoba kulandela imfihlakalo yokubulala. Izethameli zisale zibuze ukuthi ngabe isipoki sikaKurt siyayikhathaza le ndlela noma uma omunye wabahlali bakhona enesibopho sokubulala okuphindiselayo.
IWhip kanye noMzimba kwenzeka ngekhulu le-19, ngakho-ke icebile ngomkhathi weGothic, ngokungafani neBava's directorial debut, iBlack Sunday. Kepha idutshulwe ngombala okhazimulayo, igcizelela ama-blues akhanyayo nama-purples ngama-accents abomvu. Kukhishwe ngonyaka ofanayo ne-Black Sabbath yakhe efanayo, i-The Whip noMzimba basiza ukubeka isisekelo se-Bava esizayo. Umdwebi wamabhayisikobho u-Ubaldo Terzano (Obomvu Okujulile) ngokuqinisekile ubambe iqhaza esitayeleni sokubuka, kepha uBava, ngokungangabazeki, wayenokufaka okuningi.
Ngaphandle kokubonwayo, i-The Whip noMzimba kuyancomeka ngokuhlangana kwabo. UChristopher Lee (Indoda yakwaWicker) uthola isikweletu esikhanyayo ngendima yakhe ebalulekile. Abathandi bamafilimu base-Italiya bazokwamukela amanye amalungu amaningi abalingisi noBava abajwayelekile, kufaka phakathi uHarriet Medin (Igazi kanye Nentambo Emnyama), uLuciano Pigozzi (Igazi Nensimbi Emnyama), uGustavo De Nardo (Omnyama weSabatha) noTony Kendall (Ukubuya Kwabafileyo Ababi).
I-Whip noMzimba ukwengezwa kwakamuva kuqoqo le-Kino Classic le-Bava, ngokukhishwa kwe-Blu-ray okuletha okubonwayo okucebile empilweni. Isithombe esinencazelo ephezulu simnyama ngokubonakalayo kunokukhishwa kwe-DVD kwangaphambilini, kepha, uma nginikezwa irekhodi likaKino, ngithambekele ekukholweni ukuthi ukudluliswa okuyisithunzi kuyisifanekiso esinembe kakhulu sefilimu. Ngaphandle kwama-trailer, isici esikhethekile esisodwa ukuphawula komsindo okurekhodwe ngaphambilini nguTim Lucas weVideo Watchdog. Ithrekhi igcwele imininingwane, njalonjalo, kodwa futhi ibhalwe usuku oluhlekisayo (isb. ULucas ukhuluma ngendima kaLee “ezayo” kuStar Wars: Isiqephu II).
Njengemikhiqizo eminingi yase-Italy yangaleso sikhathi, ifilimu yadutshulwa nabalingisi bekhuluma izilimi zabo zomdabu base beqanjwa kabusha. Idiski lifaka uhlobo lwesiNtaliyane (olunezihloko ezifanayo) kanye ne-English dub (equkethe umuntu owenza okusemandleni akhe uChristopher Lee - hhayi indoda uqobo). Umsindo oqoshiwe uzwakala kamnandi, kufaka phakathi amaphuzu angalibaleki kaCarlo Rustichelli (Kill Baby, Kill).
Abalandeli baxoxisana ngesikhundla sikaSotswebhu noMzimba phakathi kwefilimu ehloniphekile kaBava, kodwa ifilimu yayo ehehayo ayinakuphikwa. Yize kungahle kungabi isingeniso esihle kakhulu somsebenzi wakhe, i-The Whip noMzimba kufanele kudingeke ukuthi babuke kunoma ibaphi abaqondisi bezithombe. Ukudutshulwa okuhle kwesandla somoya sikaLee, kugezwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kufinyelela kancane kancane kusuka emthunzini kuya kwikhamera kungenye yezinto ezinhle kakhulu.